'Dagaal kulama jirno Islaamka' - BBC News Somali
'Dagaal kulama jirno Islaamka'
12 Sebtembar 2010
Image caption Obama on 9/11 and Islam
Madaxweyne Barak Obama waxa u ka hadlayey xarunta Pentagon, xuska sagaalaad ee maalintii 11-ka Bisha Sept 2001 ee loo yaqaan 9/11.
Maalintaasi oo la duqeeyey dhismayaashii magaalada New York ee 'Twin Towers' iyo goobo kale, waxa ku dhintay dad ka badan 3000 oo qof.
Marnnaba annagu, Maraykan ahaan, dagaal hore iyo mid danbe midna kulama jirno Islaamka. Waxa na soo weeraray maalintan bisha September ma ahayn diin. Waxay ahayd al_Qaeda, oo ah koox xagjir ah oo bidci ah
Magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraynkaka ayaa laga xusay maalintaasi, lagana akhriyey magacyada dadkii ku geeriyodey, loona aamusay hal daqiiqo. Barack Obama waxa uu kuu baaqay in Marakanku aanayna marnaba dagaal kula jirin Islaamka, laakin waxa ay la dirirsan yihiin inuu yahay ururka al_Qaeda, oo u ku tilmaamay urur xagjir ah oo bidci ah.
Madaxweynaha Maraykaku waxa kale oo uu soo qaaday baahida loo qabo isku-dulqaadashada iyo wada noolaanshaha caqiidooyinka kala geddisan, taasi oo uu ku tilaamay inay tahay qiyamka dadka yo dalka Maraykanka, Loona baahan yahay in la dhawro xuquuqda qof kasta oo Maraykan ah, caqiido kasta oo uu haysto qofkaas.
Image caption Baaderiga Terry Jones
Xuska sannadkan ee 9/11 waxa uu ku soo hagaagey khilaaf iyo muranno qadhaadh oo toddobaadyadii aynnu soo dhaafnay ka dhex oogmey dalka Maraykanka, ka dib markii baaderiga la yidhaa Terry Jones uu ku dhawaaqay in uu gubi doono Kitaabka Quraanka maalinta 9/11, baaqaasi oo cadho iyo qaylo badan ka keenay caalamka Islaama iyo Masiixiyiita intaba, taasina ku kalliftay inuu baaderigaasi ka noqdo hanjabaaddiisii.
Image caption Site of the 9/11, New York
Waxa kake oo buuq badan ka dhashay qorshaha muslimiinta Maraykanka oo iyaguna sheegay inay masaajid weyn ay ka dhisi doonaan meel u dhaw degaanka loo yaqaanno 'Ground Zero', oo ah goobtii ay ka taagnaan jireen dhismayaashii 'Twin Towers' ee lagu burburiyey weerarkii 9/11 magaalada New York sannadkii 2001. Masiixiyiinta Maraykanku waxay u arkeen qorshahaasi inuu yahay daandaansi iyo 'xushma-darro', marka loo eego falalkii ka dhacay goobtaasi iyo dadkii ku hoobtay.